नेपाल लाइभ | २०७५ असोज २० शनिबार | Saturday, October 06, 2018 ०८:२७:५५ मा प्रकाशित
नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको दाबेदार थिए प्रभावशाली नेता डा शेखर कोइराला। निकै चर्चामा रहे पनि उनले डा शशांक कोइरालाका लागि बाटो खाली गरिदिए। शेखर तार्किक र बौद्धिक नेताका रुपमा चिनिन्छन्। कोइराला परिवारबाट कांग्रेसको भावी नेतृत्वका रुपमा देखिएका उनीसँग पार्टीको आन्तरिक जीवन, कोइराला परिवारको भावी योजना, सरकारको कार्यशैली लगायतका विषयमा नेपाल लाइभका लिलु डुम्रेले गरेको वार्ताः
निर्वाचनमा पराजयसँगै तपाईंले कार्यकर्ता भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको छ। निर्वाचनपछि धेरै जिल्ला पनि पुग्नुभयो। कांग्रेसको अवस्था स्थानीय तहमा कस्तो रहेछ?
_x000D_ जिल्लाजिल्ला घुम्दा कार्यकर्ता अलिकति निरुत्साहित पाएँ। कम्युनिस्टको दुई तिहाइ सरकार बन्दा कार्यकर्ता केही हतोत्साही भएका छन्। केन्द्रीय नेताहरुलाई उनीहरुले सुझाव दिएका छन्, सजक हुन र एकढिक्का बन्न।
केन्द्रमा हुने नेताहरु भन्दा कार्यकर्ता बढी चिन्तित छन्। हामीलाई आफ्नो पदको चिन्ता छ, उनीहरुलाई कांग्रेस बिग्रेला कि भन्ने चिन्ता छ। देश अधिनायकवादतिर जान्छ कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ। विगतमा अनुशासित भएर एकै स्थानमा ५/६ घन्टा छलफल चलाएको भेटेको थिइनँ। तर उनीहरुमा सुन्ने प्रवृत्ति बढेको पाएँ। कार्यकर्ताको चिन्ता मुख्य कांग्रेस हारेको छ भन्ने हो भने दोस्रो चाहिँ कम्युनिस्ट शासनप्रति रहेको छ।
चुनावका बेला कांग्रेसको संगठन नै थिएन। अनि हामी हार्यौं। प्रादेशिक संरचनामा कांग्रेस गएकै थिएन। एमाले–माओवादीको एकता भएर कांग्रेस हार्नु सहायक कारण हो। निर्वाचन हार्नु मुख्य कारण नै नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समस्या हो। संगठनको कमजोरीले हारेका हौं, यसलाई लुकाउनुपर्ने म देख्दिनँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामी हारेकै हो। त्यस समय दुई कम्युनिस्ट मिलेकै थिएनन्। नेतृत्वको कमजोरी देखियो।
नेतृत्वको कमजोरीसँगै संगठन र कार्यशैली नै हारको कारण देखाउँदै आउनुभएको छ। सभापतिको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाइन्छ। तर, सभापतिलाई अझ बलियो बनाउने गरी विधान आउँदैछ नि?
_x000D_ मस्यौदा समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा मैले पूरै पढिसकेको त छैन। केही विषय गम्भीर खालका छन्। पहिलो– सभापति नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ भनी राखिएको छ। यो आइडिया दिने नै गैर जिम्मेवार हो। दोस्रो– संशोधन हुनेबित्तिकै अधिवेशनमा जानुपर्यो नि। अधिवेशनमा नजाने रे। संशोधन हुनासाथ तुरुन्त लागू हुने भनिएको छ। के मक्सदले विधान संशोधन गर्न खोज्दैछौं?
पदाधिकारी कति बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण होइन। तर, सभापतिलाई अझै शक्तिशाली बनाएर निरंकुश बनाउन खोज्ने? जो सुकै सभापति होस्, निरंकुश बनाउने त होइन नि। यसले त पार्टी दुई चिरामा रहिरहोस् भन्ने देखिन्छ। खुला समाज भइसकेपछि त खुला हिसाबले हिँड्नुपर्यो। मनोनीतलाई मैले महत्वपूर्ण मान्दिनँ। सभापतिले मनोनीत गरेपछि केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेजस्तै थियो। मेरो धारणाचाहिँ सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने हो। विधानका कारण समस्या देखिए, संशोधन हुन सक्छ। अप्ठ्यारो पारेको प्रावधानलाई निलम्बन गरे हुन्छ। सभापतिलाई निरकुंश बनाइयो भने विवाद आउँछ।
विधान मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक विधान तपाईंहरुलाई अध्ययनका लागि दिएको थियो। सभापतिका लागि राखिएको प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो। अरु प्रावधानप्रति तपाईंको धारणा?
_x000D_ विधान मस्यौदा समितिमा सर्वसम्मतिबाट ल्याइएको भए सर्वसम्मत पास हुने हुन्छ। वैकल्पिक व्यवस्था पनि राखिएको छ। म आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्छु। अरु कसले के गर्छ, मलाई थाहा छैन। त्यही विचार लिएर हामी महासमितिमा जान्छौं। विधानलाई त दुई तिहाईले पास गर्नुपर्छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने क्रममा सभापतिदेखि सबै केन्द्रीय सदस्यहरु तल्लो संगठनदेखि नै लड्दै आउनुपर्छ। केन्द्रीय कार्य समितिको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। प्रादेशिक संरचना बनाउँदैछौं भने ८५ जनाले पुगिहाल्छ नि। तल्लो तहमा टिकट बाँड्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कसलाई टिकट दिनुपर्छ/पर्दैन मलाई थाहा हुँदैन भने टिकट वितरण केन्द्रबाट हुनुहुँदैन। देशभरिका टिकट पाउनेहरुलाई सभापतिले कसरी चिन्नुहुन्छ?
दुई वर्ष काम गरिसकेपछि मात्रै मत दिने व्यवस्था भयो भने कार्यकर्ता पनि खारिएर आएका हुन्छन्। सुन्दैछु, अहिले पनि वितरण गरिएको छ रे। यो त गलत हो नि।
नेपाली कांग्रेसमा आरक्षणको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरिएको छ। तीन पटक आरक्षण भइसक्यो, आउने व्यक्ति भने उनै हुन्छन्। आरक्षणको दुरुपयोग भएकाले आरक्षण एकपटक भन्दा बढी हुनुहुँदैन। यो विधानपछि आरक्षण रोकिनुपर्छ। ट्रेड युनियनबाट प्रतिनिधित्व हुनु सकेको छैन। दुई कार्यकाल बिताएपछि केन्द्रमा आउनका लागि जिल्ला सभापतिहरुलाई बाटो नै छैन। उनीहरुको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
क्रियाशील सदस्यताको विषय अलि गम्भीर नै छ। पुराना क्रियाशील नै विवादमा छ। मधेसका कतिपय स्थानमा पार्टी परिवर्तन गरिसकेका पनि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य छन्। क्रियाशील बन्न रोक्नु हुँदैन। तर, नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्छ। जस्तै: अहिले लिएको क्रियाशील सदस्यले १४औं महाधिवेशनमा मत खसाल्न नपाउने गराउनुपर्छ। उसले १५औं महाधिवेशनमा मत खसाल्न पाउने गरी प्रावधान राख्न सकिन्छ। दुई वर्ष काम गरिसकेपछि मात्रै मत दिने व्यवस्था भयो भने कार्यकर्ता पनि खारिएर आएका हुन्छन्। सुन्दैछु, अहिले पनि वितरण गरिएको छ रे। यो त गलत हो नि।
सभापतिले १४औं महाधिवेशन पर सार्ने तयारी गरिरहेको भन्दै कांग्रेसमा सभापतिको आलोचना हुन्छ। त्यसअघि मंसिरमा महासमितिको बैठक डाकिएको छ। महासमिति बैठकले कांग्रेसलाई पुनर्जागृत गराउन सक्ला?
_x000D_ महासमिति बैठकले विधानलाई पारित गर्छ। जसरी कांग्रेस जाँदैछ, मानिसहरुमा शंका हुनु स्वाभाविक हो। महासमितिले पारित गरेको विधान १४औं महाधिवेशनपछि मात्रै लागू हुनुपर्छ।
२०७६ फागुनभित्र १४औं महाधिवेशन हुनैपर्छ। महासमितिपछि एक वर्षभन्दा बढी समय रहेकाले त्यसअघि पनि गर्न सकिन्छ। एक वर्षभित्र पनि गर्न सकिएन भने केन्द्रीय कार्य समितिको काम के?
मंसिरदेखि नै गाउँ वडा अधिवेशन सुरु गर्नुपर्छ। इच्छाशक्तिको कुरा मुख्य हो। १४औं महाधिवेशन समयमै हुन्छ। कसैले रोक्न खोजेर रोकिँदैन।
कोइराला परिवारबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गुमेपछि कांग्रेस कमजोर भए जस्तो तपाईंलाई लागेको हो? महामन्त्रीले कांग्रेसको नेतृत्व कोइराला परिवारबाट भन्न थाल्नुभएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको लागि कोइराला परिवारले आधार तयार गरेको हो?
_x000D_ मलाई त्यस्तो लागेको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निरंकुश भन्थे। उहाँले नेताहरुमा बीचमा छलफल गर्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग चित्त बुझ्ने/नबुझ्ने शीर्ष तहका नेताहरुसँग बैठक बोलाइरहनुहुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। सभापति त साझा हुनुपर्छ नि। पार्टीमा विचारको गुट हुन्छ। त्यो स्वभाविक हो। तर सबैलाई समेट्ने कार्य पार्टी सभापतिकै हो। सभापतिले सिनियर नेताहरुसँग राय लिने, छलफल गर्नुपर्दैन? सभापतिको दायित्व हो– प्रतिपक्ष दलमा रहेका नेताको राय एउटै बनाऔं भन्ने।
सरकारले राम्रो के गर्यो र राम्रो भन्दिनुपर्ने? दसैंको मुखमा महँगी ह्वात्तै बढाएको छ। निर्मला पन्तको बलात्कारमा के भएको? जगजाहेरै छ। प्रहरी प्रशासन मौन छ।
कोइराला परिवारको नेतृत्वको कुरा गर्दा हा भन्दा सिनियर नेता पनि कांग्रेसमा अरु धेरै हुनुहुन्छ। जसले खट्न सक्छ, जो जनताको माझमा पुग्छ। जनतासँग जो भिज्न सक्छ, त्यसैले नेतृत्व गर्नुपर्छ। कोइराला परिवारबाटै हुनुपर्छ भन्नेमा म अडिग छैन।
१४औं महाधिवेशनका लागि आधार तयार गर्न तपाईंले पार्टीको तेस्रो धारका रुपमा चिनिएको समूहसँग निकटता बढाउनु भएको भनिँदैछ…
_x000D_ म जिल्ला जिल्लामा घुमिरहेको छु। सिनियरहरुले जसले बोलाउँदा म जाने गरेको छु। सभापतिले बोलाउनुहुन्न त जाने कसरी? मभन्दा सिनियर साथीले बोलाँउदा भेट्नु सम्मान पनि हो।
म बोल्ने नै बाहिर हो। केन्द्रीय समितिमा बोलेर सुनुवाइ हुँदैन। विधानकै विषयमा अहिले केन्द्रित भएको छु। जिल्ला जिल्लामा विधानका विषयमा कुरा भइरहेको छ। कार्यकर्ताहरुले भन्छन्– कम्युनिस्टहरुले देश खाइसक्यो, तिमीहरु आफूभित्रै लडिरहेका छौ।
वर्तमान सरकारप्रति तपाईंका अभिव्यक्तिहरु खरो रुपमा आएका छन्। सात महिनाको अवधि हेरेर सरकार असफल भएको तपाईंको निष्कर्ष हो?
_x000D_ सरकारले राम्रो के गर्यो र राम्रो भन्दिनुपर्ने? दसैंको मुखमा महँगी ह्वात्तै बढाएको छ। यसलाई कृत्रिम महँगी भन्छु म। दुई वर्षदेखि उखु किसानहरुले उखुको मूल्य पाएका छैनन्। सरकारले जानीजानी चिनीको भाउ बढाइरहेको छ।
निर्मला पन्तको बलात्कारमा के भएको? जगजाहेरै छ। प्रहरी प्रशासन मौन छ। अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्रीले १२ वर्षपछि अपराधी फेला पर्छ भन्नुहुन्छ। गृहमन्त्रीले संसदमा पुँजीवादले बलात्कार बढ्यो भन्नुहुन्छ। अरे, योभन्दा दुर्भाग्य अरु के हुन्छ?
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सुगतरत्न कंसाकारले राम्रै गरिरहनुभएको थियो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको भान्जा किन ल्याउनुपरेको? अयोग्य भनेर हटाइएकालाई पुर्ननियुक्ति दिइएको छ।
पाँच वर्षका लागि हामी सरकारबाहिरै हो। कम्युनिस्ट सरकारले नराम्रो गरेका कारण कांग्रेस बलियो हुन्छ भन्नु नकारात्मक दृष्टिकोण हो।
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध ओलीले सपारेको होइन। नाकाबन्दीपछि बिग्रिएको नेपाल-भारत सम्बन्ध ओली आउनुअघि नै सुध्रिएको थियो। क्रेडिट लिन ओलीले मिल्दैन। भारतसँगको सम्बन्ध कहिले बिग्रने र सुधार आउने इतिहासदेखि हो। ३६५ दिन नै राम्रो हुने भन्ने हुँदैन।
बूढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो। आफै बनाउने भनी कर संकलन सुरु भइरहेको छ। कम्पनीप्रति प्रश्न होइन, त्यसको प्रक्रिया हुनुपर्यो नि। टेण्डर नै गरिएन। त्यसैले यो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ।
सरकार सबैतिर असफल भयो भन्नुहुन्छ। आम सर्वसाधारणको दैनिकी महँगो हुँदै गएको पनि हो। प्रतिपक्षको भूमिका खोइ त?
_x000D_ प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर छ। पार्टीमा संवाद नै छैन, अनि कमजोर भयो। अब नेपाली कांग्रेस कसरी जाने भनेर छलफल हुनुपर्दैन? महँगी बढेको छ। सरकार आफै बदनाम हुँदै गएको छ। प्रतिपक्षमा भएर जति गर्नुपर्ने हो सकेका छैनौं। पार्टीमा फरक धार छन्। त्यसलाई एक बनाउने कार्य नेतृत्वको हो। संवादहीनता हटाउने कार्य नेतृत्वको हो।
नेपाली कांग्रेस आफ्नै बलबुताले बलियो हुन्छ कि वर्तमान सरकारका नकारात्मक कार्यले बलियो हुन्छ?
_x000D_ पाँच वर्षका लागि हामी सरकारबाहिरै हो। कम्युनिस्ट सरकारले नराम्रो गरेका कारण कांग्रेस बलियो हुन्छ भन्नु नकारात्मक दृष्टिकोण हो। सरकार असफल भएर हामी बलियो देखिने मात्रै हो। तर, बलियो हुँदैनौं। संगठनको हिसाबले कांग्रेस बलियो हुनुपर्छ।
कांग्रेस बलियो हुनका लागि विधान संशोधन हुनुपर्यो। विधान तुरुन्त लागू हुनुहुँदैन। १४औं महाधिवेसनपछि मात्रै लागू हुनुपर्छ। र, महाधिवेसन समयमै (फागुन २०७६ सम्म) गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसलाई महाधिवेशनले नै थप ऊर्जा दिनेछ।